ငါ့ဖုန်းကိုရှာပါ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် ငါ့ဖုန်းကိုရှာပါ: လေချွန်
ငါ့ဖုန်းကိုရှာပါ: လေချွန် - ရှာဖွေကိရိယာ, လက်ထောက် (find phone): ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မြည်အပေါ်အူသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျအရေးပေါ်လိုအပ်နေ၏အမှု၌, သင်ရုတ်တရက်သင်၏ကိရိယာများဆုံးရှုံးမည်ကိုကြောက်လျှင်ဆဲလ်ဖုန်း Finder နေရာလေးကိုအတွက်လာကြလိမ့်မည်။ တော့ဘူးကြောက်တယ်ဖြစ်မနေပါနဲ့! ဆုံးရှုံးသွားသောမိုဘိုင်း gadget က Finder ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းမပါဘဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည် detector app ကိုအသံရှာဖွေရေးစေမည်အသံ - ပိုမြန် & အလွယ်တကူဖုန်းကိုရှာပါ။ သင်အချိန်ကိုကယျတငျနိုငျဘယ်လိုကြည့်ရှု: မြန်ဆန်လွယ်ကူသော & တကယ်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ device ကိုရှာပါ။ app ကိုရှာတွေ့ဆဲလ်ဖုန်းသင်အမှန်တကယ်အစာရှောင်ခြင်းပင်တိတ်ဆိတ် mode ကိုအပေါ်ယခုမိုဘိုင်းကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်!
နေမကောင်းနှင့်စက်ကိရိယာများရှာဖွေငြီးငွေ့? သငျသညျမပိုအချိန်မဖြုန်းနိုင်သလဲ ရပ်တန့်, အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့! လက်ရှိတွင်အရေးပေါ်လိုအပ်နေ၏အမှု၌တော့ဘူးဆဲလ်ဖုန်းဆုံးရှုံးမစိုးရိမ် - app ကိုတစ်ဦးဖုန်းများအဘို့ကြီးသောအသံကပိုမြန်အချိန်ကိုရှာစေမည်စေ, ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းချက်ချင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်မှာကျွန်ုပ်၏ဖုန်းဖြစ်ပါသည်, အလွယ်တကူတက်ဘလက် & devices တွေကိုဘယ်မှာငါ၏အ gadgets & ဘယ်လောက်လိမ္မာပါးနပ် gadgets ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မည်သို့မည်ပုံမေးဖို့ & မေးခွန်းတစ်ခုကိုမဟုတျလော အသံနှင့်အတူကျယ်လောင်စွာလက်စွပ်, ချက်ချင်းမိုဘိုင်းဖုန်းတွေ့ရှ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသံ! ဆုံးရှုံးသွားသော device ကို Finder အဖိုးတန်အချိန်ကုန်သက်သာ & လက်ရှိပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်: တစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပီပီအသိအမှတ်ပြုမှုလျှောက်လွှာနှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုရှာ။ ပြီးတာနဲ့ပီပီအသံဆယ်လူလာပေါ်လျှောက်လွှာနောက်ခံဆူညံသံထဲမှာအသိအမှတ်မပြုကြလိမ့်မည် ထို့နောက်သူကတုန်ခါ & စေသည်ကျယ်သောအသံသည်, ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ကိုရှာလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်အအေး! သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်ယခုရယူပါ!
ငါသည်ငါ့ gadget ကပျောက်ဆုံးသွားလျှင်မူကား, အဘယ်မှာရှိငါ့အကိရိယာ (လွယ်ကူပါတယ်!) သည်နှင့်အဘယ်သို့ပြုကြရန်, မသိကြသလော ထိတ်လန့်ရပ်တန့်! ဒါဟာအလငျး၌ & ပင်မှောင်မိုက်၌အလုပ်လုပ်တယ်: ပီပီလျင်မြန်စွာ, devices တွေကိုအမြဲသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနေဒါ: တွေ့ရှိချက်တော့ဘူးမခက်ခဲပါ! GPS စနစ်မရှိဘဲ gadget Finder ရွှေ့လျားမြေပုံ: ပြီးသားအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့သင့် gadgets ဆုံးရှုံးစောင့်ရှောက်? သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာအမြဲတမ်းမေ့လျော့? - မြန်နှုန်းရှာဖွေ devices တွေကိုပိုမိုမြန်ဆန်သူတို့စက္ကန့်အတွင်းစာသားတွေ့ရှိ: မစိုးရိမ်သင် application ကိုအသုံးပြုနေသည်နေတုန်း, သင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေပါတယ်။ အသံကအသိအမှတ်ပြုဖုန်းများ Finder App ကလျင်မြန်စွာဖုန်းများ: ငါတို့သည်သင်တို့၏အဖိုးတန် gadget ကရှာတွေ့၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့မျှော်လင့်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gadget က Finder နှင့်အတူလုံခြုံဟုခံစားရ - အသိအမှတ်ပြုမှု application ကိုအသံ။ gadgets တွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်. ပြက်လုံးမေ့လျော့: ဆဲလ်ဖုန်းရာအရပျကိုတှေ့ & ယခုလူသိများသည်, မေးခွန်းများကိုမမေးကြဘူး!
~ Gadget ကို Finder: အလွယ်တကူ & အေးမြ။ သင့်ရဲ့ဆယ်လူလာအပေါ်ယခုရယူပါ!
~ android များအတွက်အသံ detector လိုပဲ, ဒါပေမယ့်မြည်ရှာဖွေသည့်စနစ်နှင့်အတူ
~ GPS စနစ်မြေပုံသို့မဟုတ်ရွှေ့လျားခြင်းမရှိဘဲ, အသံကျယ်ပီပီ & ရှာဖွေနှင့်သင်၏အမြဲရှုံးနိမ့်ကိရိယာ၏ပြဿနာဖြေရှင်း
~ အချိန်ဖြုန်းမနေပါနဲ့: ရှာဖွေရေးယခုဆယ်လူလာပျောက်ဆုံးနေတဲ့!
~ အစာရှောင်ခြင်း & လွယ်ကူသော Finder - ~ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ gadgets တော့ဘူးကြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
~ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဆုံးရှုံးလျှင် ~ အေးဆေးနေပါ။ ဘယ်လိုမေး လျှောက်လွှာကိုသင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကယ်တင်မည်
~ အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကယ်တင်ထိန်းချုပ် & ရှာတွေ့ခံစားချက်များကို
~ တကယ်လွယ်ကူပြီး & မဟုတ်လျင်မြန်စွာသင်၏ android အေးမြ gadgets ရှာနိုငျသလော စိတ်ကူးဘယ်တော့မှနိုင်သလား: "အဘယ်မှာရှိသနည်း, ငါ့စက်ကိုဖွင့်"
~ အလွယ်တကူအသိအမှတ်ပြုမှုအသံ: အမြဲထိန်းချုပ် & အလွယ်တကူစက္ကန့်အတွင်းစာသားကသင်၏အဖိုးတန်မိုဘိုင်းရှာခြင်းငှါ
~ ဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်, ကြီးသောပီပီကြိုးစားပါလိမ့်မည်: အရေးပေါ်လိုအပ်နေအသံ၏အမှု၌ပိုမိုမြန်ဆန်သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးပါမည်
အာရုံစူးစိုက်မှု: ငါတို့သည်ကျယ်လောင်ဆူညံသံ & နောက်ခံအသံများကိုဆဲလ်ဖုန်းများ၏အစာရှောင်ရှာဖွေထံမှသင်တို့တားဆီးစေခြင်းငှါသွန်သင်နိုင်မည်အကြောင်းသင့်ပါတယ်။ app ကိုမြည်အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်အမှု၌သင်တို့ကိုနှိုးဆော် & နောက်ခံဆူညံသံ သာ. ဖြစ်ကြောင်း, ကအသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပါနေတုန်းကြောင်းပင်မစံ။ ဒါ့အပြင်သာသောအသံသည်အကျင့်မြည်! ဒါကြောင့်အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်အမှု၌, နောက်ခံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုသံကိုသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင် & ဖြစ်နိုင်လျှင်တိတ်ဆိတ်ပိုနှစ်သက်ပါ။ တိတ်ဆိတ်ဖြစ်လူတိုင်းကိုမေး:
ဖုန္းေပ်ာက္တာ႐ွာမလား ခ်စ္သူေနတဲ့ေနရာေခ်ရာခံမလား broတို႔
ငါေနရာ ကိုခဏဝင္ျကည့္ပါဟာ ခ်စ္ေဒါင္း
နင္ရက္စက္တယ္ခ်စ္ ေဒါင္း နင္ရက္စက္တယ္ခ်စ္ေဒါင္း
ဖုန်းခေါ်လာသူရဲ့ နာမည်ကိုခေါ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲး
ဖုန္းတစ္လံုးရဲ႕မ်က္ႏွာပင္ကိုကိုယ့္ဖုန္း Screenမွၾကည့္မယ္ - Anydesk အသံုးျပဳ႕နည္း
Arkar Soe လူ
Min Chit Nan